Ndi Social Media Na-atụgharị Anyị na Psychopaths? | Martech Zone
Ndi Social Media Na-atụgharị Anyị na Psychopaths?
Fraịdee, June 14, 2013 Fraịdee, June 14, 2013 Douglas Karr
Oge ụfọdụ Friday! Ọtụtụ mmadụ unfollow m ma ghara inwe ekele m n'ezoghi ike na-elekọta mmadụ si eme online. Ekwenyeghi m na onwere onye choputara m dika akparamaagwa n'ihu ọha ma ọ bụ na ọ bụghị, mana enwere ike di na nwunye na-eche. Ekwetaghị m na m bụ - mana m nwere mmasị na arụmụka m n'ịntanetị. Iwe na-ewe m ọbụna otu oge - ma m ka na-agbalị ịkwanyere echiche ndị ọzọ ùgwù.
Ogologo oge nke mmadụ itinye ndụ ya na ụwa n'ezie ma jikọọ ya na onye mebere ya aghọtabeghị nke ọma. Ọ bụ ezie na ọgwụgwọ maka ị addictionụ ọgwụ ọjọọ na Internetntanetị dị kemgbe etiti '90s, ọ dị mma ịmara na ọtụtụ mmadụ karịa mgbe ọ bụla ọzọ na-egosipụta omume mkparị na-emegide mmekọrịta mmadụ na ibe ya ugbu a metụtara itinye oge dị ukwuu n'ịntanetị. Ndi Social Media Na-atụgharị Anyị na Psychopaths?
Na mgbọrọgwụ nke ọrụ m na ntanetị bụ n'eziokwu na m bụ onye ọha na eze na nghọta m. A na m aza ajụjụ n’ihe m na-ekwu na ntanetị maka itinye aha m na foto m n’elu ya. Anaghị m eme ihe ọ bụla n'okpuru amaghị aha. Ọ bụ nkwenye m na ọtụtụ akparamaagwa akparamàgwà anyị na-ahụ n'ịntanetị bụ n'ihi na enweghị mmetụta ọ bụla ndị mmadụ na-akparị ma ọ bụ na-akparị mmadụ n'ịntanetị mgbe ha na-ezo n'azụ mkpuchi nke amaghị aha. Ekwetaghị m na ndị mmadụ na-ihe ọ bụla pụtara online karịa mgbe ha na-na na ndụ n'ezie… ma ọ dị mfe na-psychopathic mgbe ị na-adịghị na-aza ajụjụ na onwe.
Ọdịnaya agaghị atụgharị na-enweghị oku na-aga-eme
Nkwado nke Usoro Inbound Marketing
Jun 19, 2013 na 5: 09 PM
Nke a bụ nnukwu infographic! Echere m na ọ dị mma. Akwa aha.
Nov 3, 2013 na 4:03 PM
O nweghi ihe jikotara ya na soshal midia. Nke ahụ bụ nanị ebe nsogbu ahụ na-ahụwanye nke ọma na ebe ama ahụ ga-emekọ ihe ọmụmụ ahụ. Ọ nwere ihe ọ bụla na-eme na eziokwu na ndị America are ..nkebere na ọrụ. Ihe niile dị na ndụ ha na-emetụta akụkụ ụfọdụ nke ọrụ, na ole na ole na-enweta ezumike ọzọ. Mgbe ndi mmadu anaghi enweta ezigbo oge ha na umu ha (ndi isi anyi na ndi ozo), umuaka amaghi ka ha na nne na nna ha siri ekwurita okwu. Imirikiti anaghị amụta mmetụta nke na-ekewapụ anyị na anụmanụ. Ahụla m ya n'ọkwa ego niile. Ndị na-akwụ nnukwu ego na-arụ ọrụ ma ọ bụ na-anọghị ya ma na-etinye obere oge n'ịzụlite ego ụtụ isi, m na-ekwu nwata ***. Jụọ onye ọ bụla na-elekọta nwanyị ma ọ bụ au, ọ dị mwute, ma na-asọ oyi n'ezie n'otu oge ahụ. Banyere obere ụgwọ ọnwa man .ọtụtụ na-arụ ọrụ abụọ wdg iji nye na ọzọ ... renmụaka na-adịghị zụlitere ọma. O di nwute na gburugburu… ..nweghi obi ike ikwu na Germany wdg bu otu, ha di oke mgbe ha na abia ezin’ulo (obughi mgbe nile ka nne), oge ezumike, wdg. Uzo di nma kariri ezinụlọ anyị. M gụrụ isiokwu oge niile na-ekwu maka etu ndị America si arụ ọrụ ọfụma n'ebe ọ bụla then .. wee gaa 6 hr workdays ma zụlite ụmụaka gị !!!
Nov 3, 2013 na 7:20 PM
Ekwenyere m na m bụ otu n'ime ndị America ahụ ị na-ekwu maka @driventowin: disqus! Agbanyeghị, ekwenyeghị m na m họọrọ ọrụ karịrị ezinụlọ. M na-eme ha abụọ ma nwee mmekọrịta dị egwu na ụmụ m (abụ m otu nna). Ekwetaghị m na ị ga-achụ otu maka nke ọzọ. Agaghị m eme ka ezinụlọ m bụrụ onye ikpeazụ.
Nov 3, 2013 na 10:58 PM
Nke ahụ dị egwu ịnụ mmadụ, ọ bụ n'ezie. Ahụrụ m ọtụtụ ezinụlọ ebe naanị ị maara na ha bụ ezinụlọ b / c ha rutere wee pụọ ọnụ. Ndị ọzọ na-enwe nsogbu nke nrụgide akụ na ụba nke na ha enweghị ike ịnụ ụtọ ndụ. Did guzobere tupu ị nwee ụmụaka? Ma ọ bụ mee ihe niile mgbe? Ọ dịkarịrị mfe ịme ma ọ bụrụ na ị nwere ụmụaka mgbe emechara, mana enwere ike ịme ya.
Nov 4, 2013 na 10:22 AM
Ọ bụ mgbe m bidoro azụmahịa nke m (ya na $ 0 na nwa m nwoke malitere kọleji) enwere m nnwere onwe ijikọ ihe abụọ ahụ n'ụzọ zuru oke! Ekwenyere m na m na-arụ ọrụ ọtụtụ awa karịa nkezi America - mana ọtụtụ n'ime ya bụ na mpụga ezinụlọ oge site na etiti abalị ruo 4AM 🙂